फेरी टिकटकमा आयो नयाँ नियम! – NepalajaMedia
फेरी टिकटकमा आयो नयाँ नियम!
January 14, 2021 93
नेपालका टिकटक एकदमै चर्चित एप्लिकेसन बनेको छ । छोटो भिडियोहरुमार्फत आफ्ना प्रतिभा देखाउन पाउने भएकोले यो एप एकदमै चर्चित बनेको हो । टिकटमा मानिसहरुले आफ्ना प्रतिभा देखाउनुको साथै दैनिक गतिविधिहरुको पनि भिडियो सार्वजनिक गरिरहेका हुन्छन् । नेपालमा मात्र नभएर विश्वका अन्य देशहरुमा पनि टिकटक एकदमै चर्चित छ । चर्चित भएसँगै टिकटक आलोचित पनि बन्दै गएको छ । आलोचना बढेपछि टिकटकले अब कस्ता भिडियोहरु हाल्न नपाइने भन्ने निर्देशिका जारी गरेको छ ।
सर्ट भिडियो एप्लिकेसन टिकटकले बुधबार विभिन्न सामाग्रीहरु हटाउनेबारेमा निर्णय गरेको छ । कम्पनीले कुनैपनि धार्मिक, राष्ट्रियताको आधारमा कुनै पनि व्यक्ति वा समूहप्रति हिं’सा देखाउने किसिमका भिडियोहरुलाई हटाउने भएको हो । साथै कम्पनीले त्यस्ता हिं’सा फैलाउने भिडियोहरु राखेको केही समयमा नै हटाउने पनि जानकारी गरेको छ । टिकटकले १३ वर्ष उमेरका एकाउन्टहरु पनि बन्द गरिने बताएको छ ।
कम्पनीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, ‘हामीले विभिन्न धार्मिक, राष्ट्रियता र हिं’श्रक सामाग्रीहरुलाई टिकटकबाट हटाएका छौँ । यो विज्ञप्तिमार्फत सबैले किन हटाइयो भन्नेबारेमा उचित जानकारी पाउनुभयो होला ।’ नेपालमा पनि कम्पनीले यस्ता भिडियोहरु हटाइरहेको छ । कतिपय यसका प्रयोगकर्ताले सामान्य भिडियोहरु पनि टिकटकले किन हटायो भन्दै पुनः अपलोड गरिरहेको देखिन्छ ।
चिनियाँ कम्पनी टिकटकको विषयमा अमेरिकाकमा प्रायजसो विवाद भइरहेको छ । अमेरिकी सेनाका प्रवक्ता लेफ्टिनेन्ट कर्नल रोबिन ओचोआले राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौती बढेको भन्दै अमेरिकामा टिकटकलाई प्रतिबन्ध लगाएको छ । शुरुवाती चरणमा नेवी र रक्षा विभागमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । अमेरिकाले गतवर्ष जासुसीको आरोपमा चिनियाँ कम्पनी हुवावेलाई अमेरिकामा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । जबकी केही महिनापछि त्यसलाई पुनः हटाइएको थियो । योबीचमा हुवावेले आफ्नै अपरेटिङ सिस्टम तयार गरेको थियो ।
Prevआजदेखि अर्को बैंकको एटिएम प्रयोग गर्दा शुल्क लाग्ने
Nextअगरबत्ती धूवाँ चुरोटको भन्दा खतरनाक, हुनसक्छ ब्रेन ट्युमर तथा क्यान्सर
१० हजार घुससहित प्रहरी हवल्दार पक्राउ
युट्युबरको ‘कन्टेन्ट’ चोरी गरेर कमेडी च्याम्पियनमा छनोट !
पार्टी एकता कमजोर पार्नेलाई जनताले माफी दिनेछैनन् : उपप्रम पोखरेल
सवारी दुर्घटनामा अनमी गंगा रानाको दुखद निधन